Nahangona Sonia Hatramin’ny 1 Hetsy Ny Fanangonantsonia Amin’ny Tambajotra Manohitra Ireo Lalàna Jadona Fampitsaharana Ny Fampihorohoroana Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Aogositra 2016 11:37 GMT
Nankatoavin'ireo mpikatroka mafàna fo manao fanentanana manohitra ireo lalàna Rosiana manohitra ny horohoro ny teny fanevan'ny fanentanana “Ny Andro Hamaliantsika Bontana ny Fanaraha-maso” tamin'ny Febroary 2014. Sary avy amin'ny Wikipedia.
Tao anatin'ny 36 andro monja, nahangona sonia maherin'ny 1 hetsy ny fanangonantsonia nalefan'ireo Rosiana mpikatroka ho fanoherana ireo lalàna famoretana ny fampihorohoroana, ary ankehitriny heverina fa ho aroso hodinihin'ireo mpanao lalàna federaly rosiana. Lazain'ireo tompon'andraikitra amin'ilay fanangonan-tsonia avy ao amin'ny tranonkala Rosiana ROI fa vao mainka mamoritra bebe kokoa ny fahalalahana miteny ao Rosia, mamoritra ireo fahafahan'ny sivily sy loza mitatao ho an'ny fahalalahana eo amin'ny tambajotra RuNet, ka tsy maintsy foanana ireo lalàna ireo.
Manohitra ny fampitomboana ireo fanarahana maso ataon'ny fanjakana ireo mpikarakara ao ambadik'ilay ezaka hetsika fanoherana amin'ny ankapobeny, anisan'izany ny Fiarahamonina ho Fiarovana ny Aterineto ary ny vondron'ny fanafahana ny tambajotra RosComSvoboda, izay lazain'izy ireo fa manome fahafahana ireo lalàna hitaky amin'ireo ISPs sy ireo fandraharahàna mba ao anatin'ny enim-bolana ny tsara ho fantatra mombamomba ny seraseran'ireo mpampiasa, anisan'izany ireo hafatra sy ireo antso. Maneho ny firaisankinany amin'ireo ISPs Rosiana sy ireo mpamokatra finday ireo mpanao sonia, izay efa nilaza mialoha fa ireo lalàna Yarovaya (anarana nomena avy amin'ny anaran'ny iray tamin'ireo mpanoratra ilay fanitsian-dalàna), dia hitondra ho amin'ny famotehana ny kalitao sy ny hahalafo be ny fidirana amin'ny aterineto, sady hanelingelina ny fampiroboroboana ny aterineto ao Rosia, hanohintohina ny indostria sy ireo mpampiasa.
Ireo fanangonan-tsonia tamin'ny tambajotra ROI izay nahangona sonia manodidina ny iray hetsy dia fantatry ny governemanta federaly ofisialy, ho sonia voamarina tamin'ny alalan'ireo kaonty manokana tao amin'ny vavahadin-tseraseran'ireo asam-panjakana rosiana. Na izany aza, tsy misy antoka izay hahafahana mahazo antoka fa hahazo alàlana ny olana iray voafaritra manokana mba ho dinihin'ny vondrona iray ahitàna manampahaizana voakasik'izany ao anaty parlemanta. Na izany aza anefa, hitan'ireo mpikatroka mavitrika ho toy ny fitaovana mahomby mikasika ny ‘demokrasia elektronika’ ary toy ny karazana ‘fanamafisam-peom-bahoaka’ izay hahafahana manaitra ny fieritreretana ny loza aterak'ireo lalàna vaovao ireo ilay fanangonantsonia.
Ezaky ny fanoheram-bahoaka
Ny 9 Aogositra teo, nikarakara sy nandamina fihaonambe iray tao Sokolniki, Distrikan'i Maosko ireo hery Rosiana mpanohitra niaraka tamin'ireo mpikatroka mafana fo ho an'ny fahalalahana amin'ny aterineto mba hihetsika hanohitra ny lalàna. Araka ny voalazan'ireo mpanara-maso tsy miankina, olona mahery kelin'ny roa arivo no tonga nanatrika ny fihaonam-be.
Nahitàna ireo mpanohitra ara-politika toa an-dry Alexey Navalny, lehiben'ny RosComSvoboda Artyom Kozlyuk, Leonid Volkov, mpiara-mikatroka politika amin'i Navalny sady filohan'ny orinasa mikasika ny fiarovana ny aterineto, ireo mpandaha-teny nandritra ny fihetsiketsehana, fandraisana andraikitra iray vaovao mihevitra ny mba hitazonana ireo fahalalahàna amin'ny tambajotra RuNet. Vovonana lahatsary amin'ny tambajotra tsy miankina Newscaster TV, izay mandefa matetika ireo famoriam-bahoaka fanoherana any Rosia, no nandefa mivantana ny fihaonana tao amin'ny YouTube, sady nametraka fandraketana iray azo arahina amin'ny tambajotra taty aoriana kely.
Efa nomanina hatao tamin'ny 26 Jolay ilay fihaonana, saingy nolavin'ireo tomponandraikitra tao Maosko ny fahazoandalana hahafahan'ireo mpikarakara hitarika ny hetsika. Nahemotra ny 9 Aogositra indray avy eo ary nafindra ho any amin'ny toerana somary lavitra ny afovoan-tanàna any Sokolniki.
Tao anaty lahatsoratra iray tao anaty Facebook, nohazavain'i Leonid Volkov ny antony nisainany hampiaraka ny fanangonan-tsonia sy ny fihetsiketsehana, na dia nomanina tsara taorian'ny fandaniana ireo lalàna, dia nisy lanjany hatrany sady dingana nanana ny lanjany tamin'ny fanoherana ilay lalàna vaovao mangeja.
…tohin'ilay tetikady iray nifanakalozanay hevitra tamin'ny fihaonambe tamin'ny 9 Aogostra io: tsy hamela ny “fepetra Yarovaya” hipoitra ao anaty fandaharam-potoana, tsy hamela an'io ho levona sy ho adino. Hanohy hamorona tsindry vaovao sy teboka maro karazana hatrany ary tsatoka vaovao manodidina azy. Hatreto, goavana no vitantsika ary misaotra betsaka anareo noho izany!!
Nosoniavin'ny Filoha Vladimir Putin tamin'ny 7 Jolay 2016 ny lalàna “Yarovaya”, sady mampiditra karazana fanitsiana midadasika maneritery ny hetsika sivily sy ny fanehoankevitra amin'ny tambajotra ao Rosia, hatramin'ny fampitomboana ny fahefana fanarahana maso ataon'ny fahefam-panjakana.